Ny famakafakana ny olan'ny fanapoizinana sy ny mainty ny antsasaky ny kendrena aorian'ny fikororohana
Fanontaniana: Miorina ny teknolojia magnetron sputtering zirconium nitride film, roa metatra ny tanjona, ny entona mitsika dia argon, ny entona mihetsika dia N2, ny herinaratra dia 300W, ny famatsiana herinaratra matetika amin'ny radio, ny deposition dia roa ora, ary ny tanjona dia avoaka aorian'ny fahavitana. Jereo ny trangan-javatra voalaza ao amin'ny lohateny, na fanapoizinana kendrena na antony hafa, fa maninona ny antsasany ihany no miseho?
Famakafakana ny antony 1: Mety misy ifandraisany amin'ny fampidirana ny herin'ny radio matetika
Famakafakana ny antony 2: Kinga kendrena kely toy izany, roa santimetatra?Ny fanamiana mangatsiaka ve??
Famakafakana ny antony 3: 300Ny hery W dia ampiana amin'ny tanjona kely toy izany, azo tohizana ve ny fihenan-tsaina? ahiana ho tsy tsara ny fampangatsiahana, mahatonga ny antsasaky ny mainty!
Famakafakana ny antony 4: tsy ampy ny fampangatsiahana. avo loatra ve ny mari-pana??
Famakafakana ny antony 5: Mety misy ifandraisany amin'ny fahefana lehibe io. Tsy sahiko fotsiny ny mampitombo ny herin'ny lasibatra amin'ny savaivony 60 hatramin'ny 100W eo ho eo.
Fandinihana ny antony 6: Milamina ve ny famatsiana herinaratra ao anatin'ny adiny roa, mety ho be loatra ny angovo, na mety hoe ny lafiny iray amin'ny kendrena dia mikasika singa fototra
Famakafakana ny antony 7: Ahiana ho misy ny olana amin'ny fahateren'ny rivotra, mieritreritra manokana
vahaolana 1: SOSO-KEVITRA 1) Zahao ny fanamiana entona; 2) Na misy famoahana rivotra amin'ny lafiny iray?
vahaolana 2: Manolo-kevitra ny hanao fanadihadiana XPS, na manao andrana indray.
FAMINTINANA: Miorina amin'ny fanadihadiana etsy ambony, ny antony lehibe mahatonga ny tanjona ho voapoizina sy ny mainty dia ny hafanana be loatra, famatsiana herinaratra tsy milamina, fitoviana amin'ny gazy sy ny fahateren'ny rivotra. Jereo ireo antony lehibe mahatonga izany, ary arotsaho isaky ny dingana.
Précédent: Fitaovana fantsona avo lenta avo lenta (4N
Manaraka: Lisitry ny masontsivana ara-teknikan'ny milina fanamafisam-peo multilayer